I-Huawei Mate 20 Pro isuswe kwimboniso ye-Android Q | I-Androidsis
I-Huawei Mate 20 Pro itsaliwe ku-Android Q yokujonga kuqala
Ngaphandle kwenyanga ezintathu ezithe zabhengezwa, UGoogle uhambisa isithuba kunye nesigqibo esitsha. Kuba sele kunjalo I-Huawei Mate 20 Pro isuswe kwimbonakalo ye-Android Q. Nangona iifowuni zohlobo lwesiTshayina zinokusebenza ngokwesiqhelo kwaye zinokuzihlaziya kwezi nyanga zintathu zilandelayo, ifemi ayifuni ngxaki malunga noku. Ngesi sizathu, basike ingcambu kule meko, basusa ifowuni kule nkqubo.
Ngale ndlela, abasebenzisi abaneHuawei Mate 20 Pro baya kushiyeka benomnqweno wokuvavanya i-beta ye-Android Q. Iindaba ezimbi kubo, ukuba ngale ndlela sele bekhona ngokusisigxina kwi-Android Pie njengohlobo lwenkqubo yokusebenza kwifowuni yabo.
Ayisiyo yokuba uGoogle ukubhengeze ngokucacileyo oku. Inkampani ithe cwaka, kwaye phantse ingakhange iqatshelwe, Isiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina sisusiwe kulomboniso wangaphambili. Kwakungobusuku bokugqibela xa isixhobo sasilahlekile kuluhlu, njengoko amajelo eendaba aliqinisekisileyo ukuza kuthi ga ngoku.
Ngale ntshukumo, inkampani ibonakala unqumle nabuphi na ubudlelwane bezorhwebo noHuawei. Isigqibo esigqibeleleyo, okanye ubuncinci imvakalelo leyo ivelisa, kodwa ekwabonakala ngathi iyangxama. Ngokukodwa ukuba sithathela ingqalelo ukuba okwangoku kukho isivumelwano seenyanga ezimbalwa.
Kubonakala ngathi inkampani yaseTshayina nayo isithathile isigqibo ngesothukileyo. Ukusukela kwiwebhusayithi yakho basabonisa amanyathelo okuba ne-Android Q kwi-Huawei Mate 20 Pro. Nangona kuyathenjwa ukuba olu lwazi luya kususwa kungekudala, ngoku uGoogle ayisusile ifowuni kule nkqubo.
Zonke ezinye iifowuni zabhengeza kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo iya kuqhubeka nokufikelela kwi-Android Q. Le beta intsha yeyona ifikelele kwezona fowuni, ngoku ekubeni iHuawei Mate 20 Pro isusiwe kuyo, inani lihlala kwiifowuni ezingama-20 xa zizonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » I-Huawei Mate 20 Pro itsaliwe ku-Android Q yokujonga kuqala
USony utyhila iqhinga lakhe elitsha leefowuni eziphathwayo